“Lalao iray izay tiako indrindra…”: efa vonona hihaona indray amin’ny mpankafy i Lalatiana | NewsMada
Niatrika avy hatrany ny famerenana… Efa andro vitsivitsy izay no nigadona indray eto an-tanindrazana i Lalatiana. Manomana ilay seho goavana izay hataony etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny alahady 15 jolay izao, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro izy.
“Faly hihaona amintsika indray. Araka ny lohahevitra, holalaovina amin’izay itiavako azy izy ity, ary isaorako ireto mpitendry ireto sy ny mpikarakara hiaraka hisary adala amiko…”, hoy i Lalatiana. Nanombohany ny resadresaka niaraka tamin’ny mpanao gazety, nandritra ny famerenana nataony omaly, io. Nitondrany fanazavana ihany koa ny mikasika ny lafiny ara-javakanto.
“Niaraka tamina mpitendry vahiny roalahy sy i Rija aho tamin’ny 2012. Amin’ity kosa, hanatanteraka ny faniriako iray, dia ny hiaraka hilalao amin’ireto zandry manan-talenta ireto”, hoy hatrany ity mpanakanto ity. Nohatevenina mantsy ireo mpitendry, satria ankoatra ireo mpiangaly ny zavamaneno tsofiny, hisy koa ny fandraisana anjaran’ireo mpitendry lokanga.
“Ny tena hampanantenainay, manomboka amin’ny 2 ora tsy diso ary hifarana amin’ny 5 ora , mba ahafanan’ireo mankafy ny kitra mijery ny lalao famaranana io. Ankoatra izay, efa niomana ela, satria seho tokony notontosaina tamin’ny taon-dasa izy ity. Nampanantena izahay fa tsy maintsy hisy io, ary seho hanana kalitao, satria ao anatin’ny fanamarihana ny faha-10 taon’ny mi’Ritsoka”, hoy kosa Randriamampianina Hery, tale jeneralin’ny mi’Ritsoka Production.
Tsy maintsy hatao ireo hira nahafantarana an’i Lalatiana nandritra ny taona maro. Na izany aza, hitondra santionany amin’ireo hira vaovao koa izy. Ankoatra izay, hisy ampahany tamin’ireo hira malagasy tranainy, izay nohavaoziny niaraka tamin’i Rija ary voarakitra anatin’ilay rakikira “Double sento” koa, hatolotr’izy ireo amin’io.